ပလပ်စတစ် Coaming PP အခေါင်းရှိသော ပျဉ်ပြား မြှောင်းပုံ သတျတော အလုပ်ရုံ စိတ်ကြိုက် နှင့် လက္ကား - Wahsun နောက်ဆုံးပေါ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အိမ်ထောင် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ > အခေါင်းရှိသော စာရွက်များ > ပလပ်စတစ် Coaming PP အခေါင်းရှိသော ပျဉ်ပြား မြှောင်းပုံ သတျတော
ပလပ်စတစ် Coaming PP အခေါင်းရှိသော ပျဉ်ပြား မြှောင်းပုံ သတျတော
ပလပ်စတစ် Coaming PP အခေါင်းရှိသော ပျဉ်ပြား မြှောင်းပုံ သတျတော, ချွေတာ နှင့် လက်တွေ့ကျတဲ့, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖော်ရွေ နှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်း။ ဤ polypropylene စစ မြှောင်းပုံ သတျတော ဖြစ် လုပ် ၏ မြင့်သော အရည်အသွေး polypropylene စစ, aစစroved ဘို့ အစာ ထုပ်ပိုး, ရှိပါတယ် ကောင်းသော ဓါတုဗေဒ resဖြစ်tance, ဖြစ် အကြမ်းခံ, waterpro၏ နှင့် moဖြစ်ture resဖြစ်tant.
အဆိုပါပလတ်စတစ် Coaming PP ဆွန်းဘုတ်အဖွဲ့မြှောင်းပုံ box ရဲ့ 1.Product နိဒါန်း
2. Flexible: တစ်ပစ္စည်းအဖြစ်နှင့် application အဖြစ်
3. Environmental အသံက: ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်း
အစားအသောက်ထုပ်ပိုးများအတွက် Approved 5.
အဆိုပါပလတ်စတစ် Coaming PP ဆွန်းဘုတ်အဖွဲ့မြှောင်းပုံ box ရဲ့ 2.Product Parameter (Specification)
ပလပ်စတစ် Coaming PP ဆွန်းဘုတ်အဖွဲ့မြှောင်းပုံသေတ္တာ
အဆိုပါပလတ်စတစ် Coaming PP ဆွန်းဘုတ်အဖွဲ့မြှောင်းပုံ box ရဲ့ 3.Product Feature ကိုထိုအလျှောက်လွှာ
pallets အတွက် Pack ကို
hot Tags:: ပလပ်စတစ် Coaming PP အခေါင်းရှိသော ပျဉ်ပြား မြှောင်းပုံ သတျတော, စိတ်ကြိုက်, စက်ရုံ, လက္ကား, ပူသော ရောင်းချခြင်း, မူပိုင်ခွင့်, နောက်ဆုံးပေါ်, dueable, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အနိမ့် စျေးနှုန်း
polypropylene စစ မြှောင်းပုံ ကျီငယ်
ပလပ်စတစ် မြှောင်းပုံ သေတ္တာများ စာပို့ ဗျတ်
အခေါင်းရှိသော PP အိပ်ရာခင်း
ခေါက် polypropylene အခေါင်းရှိသော သိုလှောင်မှု PP မြှောင်းပုံ ပလပ်စတစ် သေတ္တာများ ဘို့ fruitsvegetables
မြှောင်းပုံ ပလပ်စတစ် စာပို့ ဗူးခွံ polypropylene အဓိက ပလှေ အိပ်ရာခင်း ပျဉ်ပြား အိပ်ရာခင်းs
PP အခေါင်းရှိသော အိပ်ရာခင်း တောက်ပသော မြှောင်းပုံ ပလပ်စတစ် ပုံနှိပ်ခြင်း အခေါင်းရှိသော အိပ်ရာခင်း